PET ekpuchi ihe nkiri maka akwa mmiri na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Onyinye na-ekpo ọkụ infrared,Ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ maka mmiri mmiri,Na-ekpo ọkụ n'oge oyi
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ngwa ngwa > PET ekpuchi ihe nkiri maka akwa mmiri na-ekpo ọkụ
Ihe Nlereanya.: XHC-F018
7.4V Batrị kpo oku kpo oku dị ọkụ maka uwe maka okpomoku
Okpomọkụ: 60 ° C
kpochapu igwe akwa mpempe akwụkwọ :
1) ikpo ọkụ ọkụ, ọbụna kpo oku, akwa okpomọkụ
2) Ọrịa na-arụ ọrụ dị elu dịka 90%, ezigbo ọnọdụ okpomọkụ, ike ike, faịlụ na ihe gọọmenti chọrọ nke obere carbon.
3) Ndụ ogologo ndụ, nwere ike ịdị ogologo oge 8-10 dị ka ihe ndị na-ekpo ọkụ ọkụ.
4) Enweghị ire ọkụ, nchebe ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya, obere voltaji nwere ike tinye n'ọrụ na njirike mmadụ;
5) Ngbanwe ike, nke dị elu
6) Nkwụsịtụ nke ikuku mmiri, ngwakọta ígwè a na-ekpo ọkụ na-ekpuchi ya kpamkpam n'ime akwa oyi akwa
7) Easliy arụnyere, ọkpụrụkpụ bụkarị 0.2MM.
uwe kpo oku na mpe mpe akwa ẹkenemede
a. Igwe ọkụ ngwa ngwa na akwa akakabarede arụmọrụ, na-ahụ ọkụ
b.Small na-ekpo ọkụ ọkụ, nchekwa nchekwa na ogologo oge, ndụ ogologo oge.
c.The okpomọkụ nwere ike ịchịkwa dị ka ihe ị chọrọ, ihe ndị dị jụụ.
Enwe ọkụ ọkụ infrared, dị mma maka ahuike, nwere ike ịmepụta Ọbara Ọbara.
Anyị nwere ekele na mmasị gị na ngwaahịa anyị. Biko gwa anyị n'okpuru Ama. maka amaokwu anyị ma kpọtụrụ anyị ka ịchọta ihe ngwọta kacha mma gị.
size, max temperature, voltage, wattage, ngwa.
Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Igwe Ahụ Ike Infrared Eletriki Ejiji Eke Eke Kpọtụrụ ugbu a
Onyinye na-ekpo ọkụ infrared Ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ maka mmiri mmiri Na-ekpo ọkụ n'oge oyi Ihe nkiri na-ekpo ọkụ infrared Ihe nkiri na-ekpo ọkụ nke infrared Na-ekpo ọkụ nke infrared Onye na-ekpo ọkụ eletrik Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ